Knowledge – Page2– DigitalTimes
စမတ်ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ကင်မရာနဲ့ရိုက်သလို ပုံကောင်းကောင်းတွေထွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ရှုခင်းကောင်းကောင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့ အလင်းအမှောင်ချိန်တတ်ဖို့နဲ့ ဓာတ်ပုံသမားတို့ရဲ့စည်းကမ်းတွေကို သဘောတရားတွေကို နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေ ထွက်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။ အခုတစ်ခေါက်ကတော့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တိုင်း အမိုက်စားပုံလေးတွေထွက်လာအောင် အထောက်အကူပြုမယ့်…
Android တွေမှာ RAM ကို ရှင်းပေးသင့်လား????
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ စဉ်းစားရမယ့်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်က RAM ပမာဏဘယ်လောက်များများပါလဲ ဆိုတာပါပဲ။ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ RAM ကို သူတို့ရဲ့ရောင်းအားအတွက် ဦးစားပေးအမှတ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ လပ်တော့ပ်တွေထက် RAM ပိုများတဲ့ဖုန်းဆိုတာတော့…
လူတိုင်းကတော့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးရတာကို သဘောကျကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်သုံးသင့်တာထက်ပိုသုံးလာတဲ့အခါ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးက ဘယ်လောက်ထိနိမ့်ဆင်းသွားလဲဆိုတာတွေက တကယ်စဉ်းစားလာရမယ့်အချက်တွေပါ။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေက ရေဒီယိုသတ္တုကြွစွမ်းအင်တွေ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေကို ထုတ်လွှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့အန္တရာယ်တွေ ရှိတဲ့အတွက် မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။…
OnePlus 5T ရဲ့ Dash Charge ဆိုတာ
OnePlus က OnePlus3နဲ့ 3T ကတည်းက Dash Charge ကိုထုတ်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ် OnePlus5နဲ့ OnePlus 5T…
ကင်မရာ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ကင်မရာတိုင်းကတော့မတူညီနိုင်ပေမယ့် ကင်မရာတစ်ခုမှာပါဝင်ရမယ့်အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ အကုန်လုံးတူတူပါပဲ။ ကင်မရာတိုင်းမှာ အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်နိုင်မယ့် မှန်ဘီလူး(lens), မှန်ဘီလူးကဒေတာတွေကိုယူရမယ့် image sensor(ဒေတာတွေကိုတော့ ဒီဂျစ်တယ်ဒေတာတွေအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရမှာပါ) နောက်တစ်ခုက ဒေတာတွေအကုန်လုံးကိုစုစည်းပြီး ပုံတစ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းပေးမယ့် Software ဒါတွေအားလုံးက…
ဘာ app မှမလိုဘဲ YouTube ကနေ ဗီဒီယိုတွေတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ချနည်း
မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုများလာတာနဲ့အမျှ YouTube ကြည့်တဲ့သူတွေလည်း များများလာပါတယ်။ တချို့ကျလည်း ကြည့်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ဒေါင်းလုပ်ချသိမ်းထားချင်တဲ့သူတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ YouTube ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းလုပ်ချဖို့အတွက် Tubemate စတဲ့ app တွေ တော်တော်များများတော့…
Knowledge Mobiles & Tablets
iPhone တွေမှာသုံးတာကြာလာတဲ့အခါ နှေးသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းက????
iOS update လုပ်တိုင်း iPhone တွေက နှေးနှေးလာကြောင်း iPhone သုံးတဲ့သူတော်တော်များများပြောကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အပြစ်တင်တာလွဲနေပြီလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ iOS update ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ “ဘက်ထရီ”…
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ display အမျိုးမျိုးအကြောင်း
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ဘယ်အပိုင်းကအရေးအကြီးဆုံးလဲလို့မေးလာရင် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် အဖြေတစ်မျိုးစီထွက်လာမှာပါ။ တချို့ကလည်း ဖုန်းတစ်လုံးလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် SOC အရေးကြီးဆုံးလို့ဖြေကြမှာဖြစ်သလို တချို့ကလည်း SOC ကိုခိုင်းစေမယ့် firmware က အရေးကြီးဆုံးလို့ ဖြေတဲ့သူလည်း…
App တွေကို Force Close လုပ်ပြီးပိတ်သင့်လား???
Force Close လုပ်ပြီး app တွေကိုရှင်းတာမျိုးအကျင့်ပါနေတဲ့သူတွေ တော်တော်များများကြီးရှိပါတယ်။ iPhone 6S သုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း home button လေးကို ၂ချက်နှိပ်ပြီး ဖွင့်သုံးထားသမျှ app တွေအကုန်လုံးကို…
စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေမှာ “Megapixel” တွေဘာလို့သိပ်အရေးမကြီးတာလဲ???
ကင်မရာတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ megapixel ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ရင်းနှီးနေပါလိမ့်မယ်။ megapixel ဆိုတာကတော့ ကင်မရာတစ်လုံးရဲ့ ရုပ်ထွက်ကိုဖော်ပြပေးမယ့် pixel အရေအတွက်ပမာဏပါ။ 1 megapixel ဆိုလိုက်တာနဲ့ ပုံတစ်ပုံဖြစ်အောင်…
Software စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းဖို့အတွက် Hardware ကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း Software လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ software က ဘယ်လိုထပ်ပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးသွားနိုင်သလဲဆိုတာ အကျဉ်းချုံးပြောလိုက်ရအောင်။ Software ပိုင်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ OS…
ROM (Internal Storage) ဒီနေ့တော့ Internal Storage လို့အားလုံးသိကြတဲ့ ROM အကြောင်းဆက်ပြောရအောင်ပါ။ အကုန်လုံးကတော့ ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ internal storage ကိုပါ ထည့်စဉ်းစားကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်…
RAM တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းက RAM လို့ခေါ်တဲ့ Random Access Memory အကြောင်းပါ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် သူက CPU နဲ့ storage တို့ရဲ့ ကြားခံအနေနဲ့…
GPU မနေ့က CPU အကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ ဒီနေ့ ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ GPU အကြောင်း ဆက်ပြောရအောင်…..။ GPU လည်း CPU လိုမျိုး အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့…
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ ဘာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမလဲ?? ဘယ်သူပဲနေနေ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးစကြည့်လိုက်တာက ဒီဇိုင်းလှလား? Display resolution ဘယ်လောက်လဲ? ကင်မရာကရော MP(resolution) ဘယ်လောက်လဲ? CPU ဘယ်လောက်ပါတာသုံးမလဲ? RAM…